Showing ३१-४० of ९५५ items.
बीपीलाई विश्वविद्यालय बनाउने कि नबनाउने बहस ?
चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु, बेथितिको विरोधमा डाक्टरहरूद्वारा हड्ताल, बीपीमा अख्तियारको छापाजस्ता अव्यवस्था, अनियमितताका बारेमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएर आइरहने समाचार हुन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीमा बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा विवादास्पद रह्यो । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका बारेमा बहस चलिरहेको बेला प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने नयाँ बहस थपिएको छ । प्रतिष्ठानको ४४ औं सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको हो । प्रतिष्ठानलाई मुलुकक
चन्द्रवदनको दिन बडो कठिनले बित्थ्यो । अलिक फूर्तिलो हुनाले सानो घरको काम सबै सिध्याइकन पनि उसलाई सारा दिन फुर्सद हुन्थ्यो । बिहान उठी नुहाइवरी पूजापाठ पनि गरिहाल्थी र जब तरकारी काट्न भनी बस्दथी र उसको एउटी तीन वर्षकी छोरी बिछ्यौनाबाट उठेर आँखा मिच्दै रुँदै आउँदथी । एकछिन त्यसलाई काखमा लिई फुल्यायो, काट्दा काट्दै एउटा आलुमा चारवटा सिन्का घोची ‘नानीको खसी’ बनाई उसलाई खेल्न दियो । भात पकायो, खायो, भाँडा पनि माझ्यो, अरु घरको यताउती ग¥यो । तैपनि दिन भर्खर चढ्न लागेको हुन्थ्यो । त्यसको स्वभाव कसैसँग नमिल्ने हुनाले छिमेकीसँग आवत–जावत थिएन । अल्छीले हाई–हाई गर्दै दिन बिताउनुपथ्र्यो । जब दिन अलिक ढल्कि
प्रकाशित मितिः माघ १६, २०७७
मेरो अनुहारको अन्तरकथा
धनकुटाको स्थानीय बासिन्दा भए पनि मेरो पुख्र्यौली थलो चाहिँ ताप्लेजुङको हाङ्पाङ प¥यो । मभन्दा सात पुस्ता यतादेखिका पुर्खाहरुले जोहो गरिदिएका र आफ्नो हातमा परेपछि म आफैले जोगाउँदै अनि सुम्सुम्याउँदै आइरहेको ऐतिहासिक कागजपत्रले सप्रमाण भन्छ, म तत्कालीन आठराई थुमअन्तर्गत पर्ने हाङ्पाङको एक किपटिया सुब्बाको सन्तान हुँ । संयोगवश, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत आरके मैनाली र सीपी मैनालीको जन्मथलो पनि तत्कालीन आठराई थुम अन्तर्गत नै पर्छ । बामपन्थी नेता नन्दकुमार प्रसाईंको पुर्खालाई त मेरै पुर्खाले भैयाद बनाएका हुन् ।१९०९ सालमा लेखिएको मावोहाङ यक्सो लिम्बूको वंशावली पनि हाम्रै घरमा भेटिएको र
अबको आवश्यकताः शिक्षासँगै संस्कार पनि
एकजना वृद्ध व्यक्ति हिँड्दा हिँड्दै लडेको खण्डमा आज हामीले गर्व गरेर शक्ति भनिने कुनै पनि युवायुवतीले ती वयोवृद्धलाई उठाउँदैनन् । केवल उनीहरूको आँखाले देख्छ तर, मनलाई पटक्कै छुँदैन । उनीहरूलाई यतिसम्म पनि छुँदैन कि भोलि हामी पनि यस्तै हुन्छौँ भनेर ।आज कुनै पनि सोह्र–सत्र वर्षे छोराछोरीका बाबुआमा आफ्ना सन्तानप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यी दुईबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिन्छ । यी उमेर समूहका बच्चाहरूलाई आफ्नो मौलिक खानपान, मौलिक पोसाक, मौलिक रहन–सहन मन पर्न छोडिसकेको छ । निजी विद्यालयबाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरिसकेका कयौं बच्चाहरूलाई नेपालीमा कुनै अङ्क भन्यो भने नबुझ्नु आजको यथार्थ हो । उनीहरू
प्रकाशित मितिः माघ ४, २०७७
वि.सं. १९९० मा आजकै दिन अर्थात माघ २ गते नेपालमा एउटा ठूलो विनाश भएको थियो । त्यो भूकम्पका कथाहरु लिपिवद्ध छैनन् र भूकम्प खेपेका अनि महसुस गरेका पुस्ताहरुको देहावसान समेत भइसकेको छ । ९० सालको भूकम्पका कथाहरु तपाई हामीमध्ये धेरैले हजुरबुवा-हजूरआमा, जिजूबुवा-जिजूआमाबाट सुनेका हुनसक्छौ । ९० सालमा यसो भयो, ९० सालमा उसो भयो र खासै भन्ने हो भने आज धेरैजसो नेपाली परिवारमा पछिल्लो पुस्तामा श्राद्ध या तर्पणको दिन पनि हुनसक्छ किनकि धेरै नेपाली परिवारले ९० सालमा आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् ।भूकम्पको आवधिक समय हेर्ने हो भने हरेक ६० या ७० वर्षमा यो नेपाल अनि आसपासका क्षेत्रमा विध्वंशात्मक रुपमा आईनैरहेक
प्रकाशित मितिः माघ २, २०७७
हामी सबैको पर्वः माघे सङ्क्रान्ति
नेपालमा विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइन्छन् । चाडपर्वहरूले स्फूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ भने सबै परिवारजन तथा आफन्तजनहरू एकै ठाउँमा बसेर एकापसमा भलाकुसारी गर्दै चाडपर्व मनाउनु तथा रमाइलो गर्नुको अलग्गै मजा हुन्छ । हरेक चाडपर्वको आ–आफ्नो विशेषता छन् । आज माघे सङ्क्रान्ति । यस दिन विभिन्न फलफूलका साथै तरुल, घ्यू, चाकु, तिलको लड्डु, सखरखण्ड तथा अन्य परिकारहरू बनाएर खाने प्रचलन छ । यी खाद्यान्नहरूले शरीरमा बल, पौष्टिकता तथा ताप पनि प्रचुर मात्रामा प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा चिसोसँग लड्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यसरी हामी यिनै शुद्ध खाद्यान्नहरूको उचित मात्रामा सेवन गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको रक्षा गर्न
प्रकाशित मितिः माघ १, २०७७
३१४ पटक पढिएको
पृथ्वीनारायण शाहको विदेश नीति
विदेश नीति भन्नाले कुनै पनि देशले अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रति लिने नीति र गर्ने व्यवहारलाई जनाउँछ । यसलाई परराष्ट्र नीति पनि भनिन्छ । प्राचीनकालदेखि हालसम्म राज्यहरूले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक अवस्था र अन्य राष्ट्रले आफूप्रति गर्ने व्यवहार हेरेर विदेश नीति अँगाल्ने गर्दछन् । प्राचीन र मध्यकालमा नेपाल स–साना राज्यहरूले घेरिएको एक सानो राज्य भएकोले त्यसै प्रकारको विदेश नीति लिनुपर्ने थियो भने विश्वयुद्धकाल र शीतयुद्धकालमा फरक परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने अवस्था आयो । वर्तमान विश्व परिवेशमा देखिएको शक्ति सन्तुलन र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि चुनौती थपिदिएको छ ।
एउटा किताब जसले मलाई द्वन्द्वकाल सम्झन बाध्य बनायो
तिहारपछिको कुरा हो, सामाजिक सञ्जालमा हामीले भोगेको माओवादी कालखण्डको बारेमा नयाँ पुस्तक आएको थाहा पाएँ । त्यो किताबको नाम ‘जोर बन्दुकको छायाँ’ र लेखक श्रीभक्त खनाल रहेछन् । किताबको एउटा च्याप्टर कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा पनि आएको थियो । त्यो च्याप्टरमा लेखकले नाम नखुलाइएको डाँडोमा गएर माओवादीकालमा मारिएका मानिसको बारेमा गरेको अनुसन्धान थियो । अत्यन्तै मीठो भाषामा शिष्ट तरिकाबाट लेख लेखिएको थियो । लेख पढेपछि म धरानमा किताब कहिले आउला भनेर प्रतीक्षा गर्न थालेँ । काठमाडौंमा भएका साथीहरुले किताब राम्रो छ भन्दै फेसबुकमा राख्न थाले । भानुचोकमा रहेको पाथीभरा स्टेशनरीमा गएर किताब सोधेँ ।
प्रकाशित मितिः पुष १७, २०७७
याक्थुङ मुन्धुममा आधारित चासोक तङ्नाम मनाउनु भनेको आदिम कृषि युगको स्मृतिलाई ताजा बनाउनु हो । हुन त कृषियुग अझै पनि जारी छ । खेतबारीमा अन्नबाली उत्पादन गर्ने र त्यसलाई खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौं । तर, याक्थुङ लिम्बू समुदायले परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको चासोक तङ्नाम भने करिब ५ देखि १० हजार वर्षअघिको आदिम कृषि युगको अवशेष हो । खोरिया फाँडेर अन्नबालीको बिउ छरपोख गरेपछि फलेको (उत्पादन भएको) खाद्यान्नलाई सबैभन्दा पहिले सिवेरा याक्थुङ्मा ९इष्ट देवी या कुलदेवी युमा रु० लाई चढाएर हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरे ।अन्नबालीको बिउ संरक्षण गर्दै खेती गर्न र फलेको बाली आगोमा पकाएर खान सिकाउने आदिम स्
पाठक मञ्चः शून्यबाट झरेर एक हुँदा
केही क्षणअगाडि अचानक म रहस्यमय अन्तरिक्षमा, सौर्यमण्डलमा, आकाशगङ्गामा, ब्रह्माण्डमा या कतै झिल्को भएर विचरण गर्दै थिएँ । मैले के महसुस गरेँ भने म एउटा बिशाल ब्रह्माण्डमा कतै हराइरहेको महŒवहीन या अर्थहीन कण हुँ, जो शून्य बराबर छ । मलाई लाग्यो म शून्यताको महाशून्यमा कतै छु र त्यहाँबाट आफूलाई नियाल्दैछु । अचानक मैले पहिला शून्य थिएँ, शून्य छु र शून्यतामा बिलाउनेछु भने अनुभूत गरेँ । शेक्सपियरले भनेजस्तै शून्यबाट शून्य नै निस्कन्छ । कणले मबाट शून्य नै निस्कँदै गरेको देख्यो । रिक्तता निस्कँदै गरेको देख्यो । अचम्मसँग आफ्नो अनुपस्थितिलाई आफैले हेर्दैछ । रित्तो देखिँदैछ । फगत् रित्तो । त्यहीक्षण
२५९ पटक पढिएको